China paaki T-B3516 Nlụpụta na Factory | TIGERNU
TIGERNU multi-ọtọ ejiji azu paaki
Ikike: The USB azu paaki size bụ 31 19 * 45cm, otu iche iche padded laptọọpụ n'akpa uwe na azụ n'akụkụ, jide ruo 15,6 inch nke laptọọpụ
Njirimara: na eriri chaja n'ime USB. Ọdụ USB na-akwụ ụgwọ n'èzí na eriri USB n'ime. Akpa akpa USB a na-enye gị ụzọ dị mfe iji kwụọ ụgwọ maka ekwentị mkpanaaka gị mgbe ị na-eje ije ma ọ bụ na-eme njem n'èzí.
Nchedo: ihe nkpuchi mkpịsị aka abụọ na-eme ka ezé ezé anọ na nnukwu oghere, yana isi ụzọ abụọ na-ekpochi mkpọchi site na mkpọchi, na-ezere ịlafu ihe onwunwe gị. ekpochi ọnụ na zipa puller ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
Fortdị obi ụtọ: "S" na-agbatị eriri ubu nwere ike ịhapụ nrụgide ubu gị ma kwe ka ọ dịrị gị mma. Nkọwa zuru ezu nke mmadụ na-eme ka ọ dịkwuo mma maka ndụ anyị kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ, obere akpa mkpọchi & ugogbe mkpuchi , ZIP mkpọchi uwe & eriri akpa n'akụkụ azụ, na na.
Quality: Ọ bụ nke 300D durable oxford fabric with PVC PVC. Ahaziri buckles & ngwa na sturdy ihe, na-ewusi kpachie & mkwado niile ibu na-ebu akụkụ
Akpa akpa a nwere ike inye gị ọmarịcha ahụmịhe njem gị na njirimara niile. O zuru oke maka ulo akwukwo, oru, njem, ahia, njem na ihe ndi ozo. Ejiji ejiji maka ụmụ akwụkwọ, ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke.
Nọmba nlereanya T-B3516
Ụdị: Laptọọpụ Laptọọpụ
Agba: Agba ntụ, isi awọ
Mbukota: 20 PC / ctn
Nha: L31 * W19 * H45cm
Ụdị: Ejiji, Ntụrụndụ
Dabara na laptọọpụ size: 15.6 sentimita asatọ
Ojiji: Ojiji kwa ụbọchị
Nke gara aga: Paaki T-B3351
Osote: Paaki T-B3585
Obere akpa paaki
Akpa azu paaki